Ihe niile banyere Draịvụ nkebi Iweghachite na mgbake nkebi
Partitions na-ekewa n'ime abụọ na ụdị, na otu onye bụ Isi na ndị ọzọ bụ Secondary ma ọ bụ ihe ezi uche nkebi. Isi nkebi a na-eji iji wụnye sistemụ otú a ha na-akpọ ka n'ọrụ nkebi na sekọndrị nkebi na-eji dị ohere nchekwa. Ị nwere ike ịmepụta anọ bụ isi partitions na 24 ezi uche partitions. -Arụ ọrụ na partitions mbụ, anyị kwesịrị ịma ihe mere anyị mkpa ike multiple partitions. Anyị kwesịrị iji wụnye multiple sistemụ ma ọ bụ irè ojiji nke nchekwa, iche iche usoro faịlụ site na onye ọrụ faịlụ, na-usoro nchebe ma na-echebe, nkwado ndabere na mpaghara usoro faịlụ nke sistemụ.
A Iweghachite nkebi bụ a iche iche ohere nchekwa ebe ndabere nke sistemụ na-echekwara. Ọ esetịpụ ndabere oyiyi nke arụnyere sistemụ nakwa dị ka arụnyere software, ngwaọrụ ọkwọ ụgbọala na usoro ntọala. Ọ bụrụ na ndị usoro okuku n'ihi ihe ọ bụla na sistemụ nwere ike reinstalled si mgbake oyiyi na niile software na ntọala ọnụ.
Part1: Olee otú iji wepụ na ike mgbake nkebi
Part2: Top 5 ike mbanye nkebi mgbake software
Part3: The iche n'etiti Windows 7 na Windows 8 mgbake nkebi
Nkebi nke 1: Olee otú iji wepụ na ike mgbake nkebi
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Windows 8 onye ọrụ, ị ama maara na nsogbu na-mgbe wụnye Windows 8 na ohere nchekwa dị bụ buturu erughị na ọ kọwara. Ndị a nwere ike mere maka di na nwunye nke ihe. Ma ukwuu n'ime ihe kpatara ya bụ na ohere nchekwa na-nwere site na Windows mgbake onyinyo nke ọtụtụ gigabytes ma ọ bụ mgbe ụfọdụ usoro soplaya-agụnye ha onwe ha mgbake nkebi. Kasị nke oge a PC abịa na ọ dịkarịa ala 500 gigabytes nke nchekwa, na nke a abụghị nnukwu nsogbu ha. Ma ndị na-eji Ultra-akwụkwọ PC na 64 gigabytes ma ọ bụ 128 gigabytes nke SSD nchekwa, bi 10 ma ọ bụ karịa gigabytes nke nchekwa site Windows Iweghachite Image bụ nnukwu nsogbu. The ngwọta dị nnọọ mfe. Ị nwere ike ibugharị mgbake nkebi na mpụga media ma ọ bụ ụgbọala na ihichapụ mgbake nkebi ịtọhapụ ndị nwere ohere.
Ka anyị hụ otú ka ihichapụ mgbake nkebi na Windows 8. Ugbu a na-eso nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1: jikọọ a USB mbanye nke dịkarịa ala 16 gigabytes nke nchekwa (Ị ga mkpa ohere nchekwa ọ bụrụ na gị mgbake nkebi size bụ ibu). The USB mbanye ga-Ị tupu akpụ akpụ mgbake nkebi. Ya mere, ndabere niile dị mkpa data si USB mbanye.
Nzọụkwụ 2: Gaa Malite ihuenyo na ụdị "Mepụta A Iweghachite Drive". Ịgbanwe search nyo na Ntọala ma họrọ "Mepụta a mgbake mbanye" ẹkedori Iweghachite Drive Ọkachamara. Ọ bụrụ na onye ọrụ na akaụntụ akara ozugbo maka ikike wee pịa ee bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3: Mwepụta usoro ihe omume "Iweghachite Drive ọkachamara" na ego "Detuo mgbake nkebi si PC na mgbake mbanye" nhọrọ na iti Next bọtịnụ.
Nzọụkwụ 04: Na-esote ihuenyo ahọrọ ndị USB mbanye na iti ọzọ.
Nzọụkwụ 05: Na-esote ihuenyo a ịdọ aka ná ntị ga-apụta na-ekwu na niile faịlụ na mbanye ga-ehichapụ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla onwe faịlụ na mbanye, jide n'aka na ị kwadoo faịlụ. "Ọ bụrụ na ị na-ama ndabere gị USB mbanye mgbe ahụ kụrụ ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-echefu ndabere gị data mgbe ahụ mbụ azụ data si USB mbanye mgbe ahụ kụrụ ọzọ.
Nzọụkwụ 6: Mgbe Windows completes edegharị mgbake nkebi ka USB mbanye, a ozi ga-gbapụta sị na i nwere ike inweta onwe ụfọdụ ohere site ihichapụ mgbake nkebi. Na-egosikwa otu nhọrọ ka ihichapụ mgbake nkebi.
Nzọụkwụ 7: Pịa na "Hichapụ mgbake nkebi." Ọ ga-egosi gị a ịdọ aka ná ntị na-ekwu, site ihichapụ nkebi, ị nwere ike onwe ụfọdụ mbanye ohere ma na-enweghị mgbake nkebi ị nwere ike ghara weghachi Windows. Ka ị na-ama ama gị mgbake nkebi ka USB mbanye, i kwesịghị iche ọ bụla erughị ala. Ị nwere ike ugbu ihichapụ mgbake nkebi.
Nzọụkwụ 08: Pịa bọtịnụ "Hichapụ" ka ihichapụ Windows Iweghachite nkebi.
Mgbe-emecha ọrụ, Windows ga-egosi gị otú ihe ohere i nwetaghachiri site ihichapụ mgbake nkebi.
The n'elu nzọụkwụ-na-nzọụkwụ ndu wepụ partitions bụ naanị-arụ ọrụ maka Windows 8. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihichapụ mgbake partitions ndị ọzọ ọrụ usoro, i nwere ike na-agụ otú ehichapụkwa ike mbanye nkebi.
Ma mgbe ụfọdụ anyị na-ata ahụhụ site na reinstalling Microsoft Windows ruru mkpari spyware agha ma ọ bụ reformatting draịvụ ike ma ọ bụrụ na kọmputa nwere dịghị mgbake nkebi. Reinstalling Windows mgbe ahụ bubatagharịa niile ngwa na tọgharịa niile ntọala bụ a na-egbu mgbu ma na-ewe na heinous usoro. Ma i nwere ike ikwu nke a na-ewe oge usoro nanị site ndabere gị freshly arụnyere Windows na mkpa na ngwa ma ntọala ma ọ bụrụ na i kere a mgbake nkebi n'ihu. Ka ịmepụta a mgbake nkebi, na-agụ otú nkebi ike mbanye.
Nkebi nke 2: Top 5 ike mbanye nkebi mgbake software
Mgbe ijikwa diski ike mbanye partitions, a obere ndudue pụrụ iduga nhichapụ ma ọ bụ formatting nke partitions. N'ihi nke adịkwa a ngụkọta nkebi nke oke data ga-agbawa obi. Ndị a data-apụghị Ewepụtara site ọ bụla ịba uru esịne ke sistemụ. Ma ebe a bụ ụfọdụ magburu onwe software dị ka-enyere gị aka-ewepụta gị data, nakwa dị ka ngụkọta nkebi. Ebe a bụ ihe kacha mma ise ike mbanye nkebi mgbake mmemme:
Ọrụ System akwado
01. Wondershare Data Recovery $39.95 Windows 8.1 / 8/7 / Vista / 2000 / XP
02. 7-Data nkebi Iweghachite $39.95 na elu Windows 7/8 / Vista / XP
03. Arụsi ọrụ ike @ nkebi Iweghachite Free Windows 7/8 / XP / Vista / 2003/2008/2012 / WinPE
04. Stellar Phoenix nkebi Iweghachite - Professional $ 99 Windows 7/8 / vista / XP
05. TestDisk, Data Recovery Open isi iyi Windows NT4 / 2000 / XP, 2003 / Vista / 2008/7, Linux, Mac OSX
Wondershare Data mgbake bụ n'elu 1 ike mbanye nkebi mgbake ngwá ọrụ. Ọ na-enyere ndị ọrụ na-naghachi banyere 550+ ụdị nke faịlụ site na niile nchekwa ngwaọrụ, ike draịva, color, igwefoto dijitalụ nakwa dị ka iPod na MP3 / 4 egwuregwu. Ọ na-agụnye anọ iche iche nke mgbake mode na otu n'ime ha bụ nkebi mgbake naghachi furu efu ma ọ emerụ partitions. Gụọ Nduzi na otú naghachi partitions.
Anọ mgbake mode: furu efu faịlụ, Ọkachamara, nkebi ma raw mgbake.
Ihe karịrị 500 faịlụ formats akwado.
Preview nhọrọ tupu mgbake.
Iyo ma chọọ faịlụ site na aha, ụbọchị, size.
Ọrụ nwere ike ịkwụsị ịgụ isiokwu ọ bụla oge.
The interface bụ onye ọrụ enyi na enyi.
Mgbake usoro dị ka a nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu. 3 nzọụkwụ ga-ehichapụ faịlụ azụ.
Ọ nwere ihe ndị kasị faịlụ Ọkpụkpọ nkwado.
Faịlụ site na ekwentị mkpanaaka na MP3 / 4 Player nwekwara ike gbakee.
The software bụ obere nnukwu na 23.9MB.
7-Data nkebi Iweghachite:
7-Data nkebi Iweghachite e mere na-naghachi data si emerụ, furu efu, ehichapụ ma ọ bụ formatted partitions na kpọmkwem otu mbụ Ọdịdị ndị ehichapụ site na mberede. Nke a mgbake software na-enyekwara naghachi data si jiri na-emerụ ike mbanye, repartition a disk (Fdisk) ma ọ bụ nkebi re-formatted disk wdg
File usoro akwado site na omume na-NTFS, NTFS5, EXFAT, FAT32, FAT16 na FAT12.
Na-akwado fọrọ nke nta nchekwa ngwaọrụ dị ka, SATA HDD, SSD, USB HDD, USB Flash Drive, SCHI HDD, Hardware wakporo, kọmpat flash kaadị, Memory Stick Pro, iPod na ndị ọzọ na nchekwa ngwaọrụ.
Na-akwado Windows 8/7 / Vista / XP / Server Edition 2008.
Na-akwado a dịgasị iche iche nke reputed dijitalụ disk emepụta dị ka, Digital, Seagate, transcend, Silicon Ike, Fujitsu, Samsung, HP na ndị ọzọ.
Na-akwado SanDisk, Sony, Toshiba, Samsung, transcend, Kingston, KingMax, Hitachi, a-Data ebe nchekwa kaadị.
Na-akwado search site Filename, Ụdị, Location, Extension, Size, Ụbọchị Kere, wdg
Ọ dị mfe iji na nzọụkwụ site nzọụkwụ ọkachamara usoro.
Ọ bụ ike iji weghachi data si nile di iche iche nke partitions n'agbanyeghị jiri, emerụ ma ọ bụ efu, Ị.
Natara faịlụ na-enịm ke otu Ọdịdị dị ka ya gara aga ọnọdụ.
The interface bụghị ọrụ enyi na enyi.
Ọrụ ike ihuchalu faịlụ n'ihu mgbake.
Arụsi ọrụ ike @ nkebi Iweghachite:
Arụsi ọrụ ike @ nkebi Iweghachite bụ kacha mgbake ngwá ọrụ dị ka a freeware tinyere ya ugwo nsụgharị. A na ịba uru na-enyere iji weghachi ehichapụ na mebiri emebi ezi uche draịva na partitions n'ime DOS na Windows gburugburu ebe obibi. Mfe QuickScan atụmatụ Recovers na nso nso-ehichapụ nkebi na elu ala-larịị Doppler atụmatụ naputa partitions na-ehichapụ ogologo oge gara aga na re-formatted ma ọ bụ re-partitioned.
Akwado faịlụ usoro: exFAT, Ext2 / Ext3 / Ext4.
QuickScan achọpụta ehichapụ ma ọ bụghị re-formatted partitions.
SuperScan achọpụta mebiri emebi na re-formatted partitions.
Ndabere ma ọ bụ weghachi nkebi bụrụ na nke data ọnwụ.
VMware, raw ma ọ bụ abịakọrọ disk data nwere ike natara
Ọ bụghị nanị na naputa data si niile ụdị partitions kamakwa ndabere data site ndi.
The free version dị maka ọrụ.
Mgbe ụfọdụ ọ na nwere nsogbu na-agbake re-formatted nkebi.
Ọ na-eweghachi na-abụghị usoro nkebi.
Stellar Phoenix nkebi Iweghachite - Professional
Stellar Phoenix nkebi Iweghachite bụ a kasị gosiri nkebi mgbake omume na-arụzu mgbake usoro ngwa ngwa si niile Windows ike draịva na nchekwa ngwaọrụ.
Ọ nwere Raw Iweghachite na-enyere ndị ọrụ na-naghachi data si rụrụ arụ mgbasa ozi faịlụ.
Ọ ga-agbake na-eweghachi ehichapụ na efu ozi ịntanetị na MS Outlook.
Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na ịhụchalụ faịlụ n'ihu na ịpị naghachi.
Tupu mgbake, ọ ga-mpikota onu faịlụ-akpaghị aka.
Ọ bụghị nanị a nkebi mgbake ngwá ọrụ ma ihe niile-na-otu data mgbake ngwá ọrụ.
Ozi ịntanetị nwere ike gbakee.
The software bụ nnọọ oké ọnụ jiri ya tụnyere ndị ọzọ software.
TestDisk bụ OpenSource ike data mgbake software. Ọ bụ iji nyere naghachi furu efu, ehichapụ ọ bụ mebiri emebi partitions nakwa idozi disk na-adịghị buut. Ọ nwekwara ike naghachi nkebi tebụl. TestDisk na-arụ ọrụ maka ma novices na ọkachamara data mgbake ọkachamara.
Mgbake-arụ ọrụ maka nkebi tebụl.
Ọ bụ ike naputa site na nkwado ndabere na mpaghara FAT32 faịlụ usoro.
Ọ ga-enyere ọrụ wughachi buut ndi.
Ọ bụ a na-emeghe isi ngwá ọrụ mere na ọ bụ free iji.
Ọ na-akwado fọrọ nke nta niile na ọrụ usoro.
Data mgbake ọkachamara nwere ike ikpokọta a software na ndị ọzọ omume ịzụlite a ngwá ọrụ ọhụrụ.
Ọ dịghị ihe onyeōzi interface.
Ọ bụghị adabara obere ahụmahụ ọrụ ezie na ọ kwuru otú ahụ. Naghachi media faịlụ, ọrụ nwere iji PhotoRec iwu.
Nkebi nke 3: The iche n'etiti Windows 7 na Windows 8 mgbake nkebi
Windows 7 nwere wuru na mgbake atụmatụ. Ọ bụ oké mma ndị na-ka preinstalled Windows 7 na nwere a Windows 7 echichi DVD. Windows 7 na-emepụta obere iche iche nkebi na draịvụ ike mgbe wụnye. Windows 7 na-echekwa buut usoro faịlụ na zuru ezu set nke mgbake ngwaọrụ na-agụnye iwu ozugbo, System Weghachi Mmalite idozi, Complete PC Weghachi, wdg nhọrọ dị na-enweghị fanye Windows 7 DVD na buut site na ya.
Windows 8 si wuru na mgbake usoro dị nnọọ iche windows 7. Ọ bụ elu ndị ọzọ ma na-enye nza nke nhọrọ iweghachi gị PC ndabara ma ọ bụ dị ka ihe dị ọcha echichi na ọkacha mmasị gị na mkpa ngwa. Nke a na nhọrọ na-azọpụta anyị si na-ewe oge heinous usoro dị ka mgbake nkebi dere zuru nwụnye. Windows 8 na-emepụta a mgbake onyinyo nke sistemụ ka a nkebi nke ike mbanye. Ọ bụrụ na sistemụ bụ mebiri site virus ma ọ bụ spyware mgbe ahụ ị dị nnọọ mkpa iji weghachi image ọzọ karịa echichi nke dum sistemụ, na ị ga-ahụ dị ọcha factory ndabere Windows nwụnye.
Top 10 Free Draịvụ Iweghachite Mmemme
Chọta My iPhone: Olee otú Mbido, Kwado, gbanyụọ na Iji
Mac update asịrị na 2014
The free na ụzọ kasị mma naghachi data si HDD ike mbanye
> Resource> Draịvụ> All banyere Draịvụ Iweghachite nkebi ma nkebi Iweghachite